ट्रम्पको भारत भ्रमणः कश्मीर विवादमा किन बोलेनन् ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यिनी हुन् कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्ने १०२ वर्षीया इटालियन महिला
काठमाडौं । इटालीकी १०२ वर्षीया एक वृद्ध महिलाले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)माथि विजय प्राप्त गरेकी छन्। कोरोनाले […]
कोरोना संक्रमतिको संख्या विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा, किन बन्यो न्युयोर्क नयाँ इपिसेन्टर ?
काठमाडौं । अमेरिका विश्वमा नै कोरोना संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक बनेको छ । त्यसमध्येपनि […]
काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । स्वास्थ्य जाँचका क्रममा […]